गीत गाएर आफ्नो आमालाई बोलाउने बाघ ! (भीडियोसहित) - ग्लोबलपाटी
गीत गाएर आफ्नो आमालाई बोलाउने बाघ ! (भीडियोसहित)
ग्लोबलपाटीप्रकाशित मिति: २०७७ चैत्र ९, सोमबार (६ महिना अघि)
२६४ पाठक संख्या
एजेन्सी । रुसको एक चिढियाघरमा आजकल एक बाघ आफ्नो सुरिलो स्वरका कारण प्रख्यात बनेको छ ।
विटास नामको यो बाघ आठ महिनाको छ । यो बाघ अमुर प्रजातिको हो । यो प्रजातीका बाघ सबैभन्दा ठूला, तेज र चलाख हुन्छन् । विटासलाई जब आफ्नी आमाको ध्यान खिच्नुपर्छ, तब ऊ गाउन सुरु गर्छ । विटासले चराले सुसेलेज जस्तै आवाज निकाल्छ । सर्बियाको बरनाल चिडियाखाना बस्ने विटासको आवाज कतिपयका नजरमा चराले सुसेलेजस्तो र कतिपयलका लागि बाँदरको हाँसोजस्तै छ । विटास यही आवाजका कारण सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
रोचक सम्बन्धि थप
कंगारुसँग जोडिएका अनौठा रहस्य
यी बालकले कसरी घटाए १०८ किलो तौल ?